Indlela yokusinda usizi olubi
Alukho ulwazi ku-psychology oluzoshisa ukushisa kwabantu nobudlelwane, kodwa ububele bakho buyobe bujulile uma uqonda ukuthi kwenzekani emphefumulweni womuntu oye wabhekana nosizi olunzima.
"Ngeke kube njengalezi!" - enye yokuphendula kokuqala ezindabeni zokufa komuntu othandekayo, kulesi simo isimo sethu sokungafuni ukwamukela iqiniso. Ngakho-ke, umuntu osiziyo okokuqala kwenzeka, ehlile, enqatshelwe, engekho izinyembezi, kukhona umuzwa wokuthi okwenzekayo ngandlela-thile ngombala. Lesi yisigaba sokuqala sokungajabuli - "ukuthuthumela." Ngokushesha kufakwe indawo "yokusesha" isigaba. Iqiniso liyabonakala njengokungathi ngeveli, ngoba kaningi kunomqondo wokuba khona komuntu othandekayo oshonile. Imizwa enjalo ingokwemvelo, kodwa ngezinye izikhathi iyesaba, futhi indoda iyazibuza umbuzo - ingabe ngiyahlanya?
Khona-ke kufika isigaba sosizi olunzima - lesi yisikhathi esinzima kakhulu, esivela emavikini ayisithupha ukuya kusikhombisa. Ukuhlupheka hhayi kuphela ezingeni lomphefumulo, kodwa futhi nasemzimbeni: kaningi kunobuthakathaka emisipha, ukulahlekelwa amandla, umuzwa wenkinga yazo zonke izinyathelo, ukucindezela esifubeni, ukuphefumula okujulile nesindayo, ukwehla okungavamile noma ukukhungatheka kwesifiso, ukuphazamiseka kokulala. Inombolo enkulu yemicabango nemizwa ebuhlungu iphumelelana: ukuphelelwa yithemba, umuzwa wokungabi namandla, ukungabi nalutho kwempilo, isipiliyoni secala labo kulokho okwenzekile.
Kuxhomeke emfanekisweni womuntu oshonile, into ngayinye ngesizathu esithile ihlotshaniswa nayo: indebe - wayithanda leli phethini, ibhokisi lemeyili - kuphela wathatha amaphephandaba, i-watch isipho sakhe. Umuntu uqala ukuzisola ngokuthi abazange bakwazi ukwenza okuthile ndawonye ekuphileni.
Ekugcineni, impilo iyingxenye yayo, usizi olubi luyeka ukuba yinto esemqoka ekuphileni komuntu. Kodwa-ke, ngezikhathi ezithile umuntu usazizwa "ukuthuthumela okwehla" - kungekudala, kodwa ukuhlaselwa okubuhlungu kabuhlungu. Cishe unyaka owodwa kamuva, isigaba sokugcina "sokuqedela" siza. Ungasinda kanjani usizi olubi? Umuntu angabhekana kanjani nokubhekana nokuhlupheka?
- Ekuqaleni kufanele uzame ukuchitha isikhathi esiningi ngangokunokwenzeka kulo muntu. Ungabheke noma yimaphi amazwi aduduzayo. Okubaluleke kakhulu kulezi zimo ukuhlala kwakho, ukulungele ukulalela noma yikuphi ukungazi lutho, ithuba lokugeza izitsha nokuphendula ucingo.
- ungayisusi muntu osiziwe emisebenzini nasemisebenzini ehambisana nomngcwabo. Ungayidluli nge-valerian, futhi ngisho nangaphezulu nama-agent aqabulayo anithinta kakhulu umzimba. Into ebaluleke kakhulu ukuvimbela umuntu ukuba enze izinqumo ezibalulekile zokuphila ngalesi sikhathi.
- umsebenzi oyinhloko wesigaba sosizi olunzima ukudala isimo sengqondo esihle, lapho kuyokwazi ukukhumbula oshonile, zonke izinhlobo zeziqephu ezivela empilweni yakhe. Ukukhuluma kwakho kuzodingeka futhi kuyadingeka. Lokhu ekuqaleni kungabangela ukubhoboza imizwa kumuntu, kodwa masixoxe kabanzi ngangokunokwenzeka, ngaphandle kokumlahla noma ukumgxeka.
- Uma emva kwamasonto angu-6-7 umuntu engabuyeli emisebenzini yakhe yansuku zonke nangomsebenzi, kudingekile ukuba aphikelele kodwa amthinte ngobumnene.
- Kufanele kukhunjulwe ukuthi phakathi nonyaka wokuqala emva kokulahlekelwa, izinsuku zokuzalwa zeholide nezinsuku ezingakhohlwayo yizikhathi lapho imizwa yokudabuka iba nzima kakhulu. Vakashela noma okungenani shayela umuntu ngalezi zinsuku futhi uqiniseke ukuthi uyomvakashela ngosuku lokufa. Kule nkathi yokugcina, ukubukeka kwesilingo (ikakhulukazi engazi lutho) kungenziwa isikhathi eside, njengokungathi ukuhlala kuso. Kungakhathaliseki ukuthi kungani-kungakhathaliseki ukuthi ukwesaba impilo entsha, umcabango wokuthi uhlala ulilela umfelwa - ubufakazi bokuthi umthandayo kanjani, kubalulekile ukusiza ukuqedela ukulila. Ukukhala ngokuphela - kunememori.
UJulia Sobolevskaya , ngokukhethekile isayithi
Ihlobo, ilanga, ulwandle, olwandle
Konke mayelana nobuhlobo bokuqala, nokuthi ungabhekana kanjani nabo?
I-Psychology yomndeni emva kokuzalwa kwengane
Ingabe ukuthanda iholidini ubugebengu noma i-adventure?
Ubuhlobo bomshado nomama nomdala ongashadile
Uthanda kanjani umfana? Izimpendulo zinikezwa amadoda aneminyaka engama-20 kuya ku-55
Ubudlelwane nomyeni emva kokuzalwa kwengane
Sidlala imidlalo ehlukene ngebhola
I-Horoscope V.V. U-Putin we-2018: Izinkulumo zezinkanyezi ngokugula
Izinto zokuphulukisa ze-citrus kanye ne-ginger
Ingoma kaKhisimusi: umbhalo, amazwi wezingoma ezinhle kakhulu zikaKhisimusi
Isaladi ekholifulawa utamatisi namakhukhamba
I-Toothpaste yezingane ezincane
U-Ilya Lagutenko, izimpawu zothando
Ukukhishwa kwesikhumba, ukuhlinzwa
Iresiphi elula ye-pasta ne-safari ne-ricotta
Izinduna zamadoda ezingu-10 nendlela owesifazane elwa ngayo
Unogwaja obamba izinyosi namazambane neminqumo
I-Herringbone evela ku-profiteroles
UGarik Martirosyan nomndeni wakhe
Ikondomu yabesifazane: imithetho yokusetshenziswa
I-Pizza - i-Cappeycakes
U-Nikita Presnyakov wamangala ngezimbulo mayelana nentsha ethi "patsan"